अम्मान, जोर्डनको राजधानीमा के हेर्ने यात्रा समाचार
अम्मान, जोर्डनको राजधानीमा के हेर्ने
मारिएला क्यारिल | | जोर्डन, के हेर्ने
जोर्डन संसारको यस भागको एक धेरै पर्यटन देश हो र संयुक्त राज्य संग सबै भन्दा राम्रो सम्बन्ध। जोर्डनको हाशिमेइट किंगडम जोर्डन नदीको किनारमा छ र इराक, साउदी अरेबिया, इजरायल, प्यालेस्टाइन, लाल सागर र मृत सागरको सीमा छ त्यसैले यो इतिहासको प्रेमको लागि उत्कृष्ट स्थान हो।
अम्मान जोर्डनको राजधानी हो र यो देशको प्रवेशद्वार हो कि धेरैलाई रानी रानियाको उत्कृष्ट उपस्थितिको साथ पत्रिका होलामा थाहा थियो! यो सहरको सबैभन्दा ठूलो संख्या भएको सहर हो र मध्यपूर्वलाई ध्यानमा राख्दै यो निकै उदार र निकै पश्चिमीकृत छ। त्यसो भए यो एक सहर हो जहाँ विदेशी पर्यटकले सहज महसुस गर्छन्। आज यो सब भन्दा धेरै देखिएको अरब शहरहरू मध्ये एक भएको छ, त्यसैले यहाँ छ सबै तपाइँ देख्न र अम्मान मा गर्न सक्नुहुन्छ.
2 अम्मान पर्यटन
अम्मान उपत्यका क्षेत्रमा छन् र मूलतः सात पहाडहरूमा निर्माण गरिएको थियो त्यसैले पहाड प्रोफाइल अझै पनि धेरै विशेषता हो रमाईलो गर्नुहोस् अर्ध शुष्क मौसम त्यसैले वसन्तमा पनि तापमान º० डिग्री सेल्सियसको नजीक छ। ग्रीष्म usuallyतु प्राय तातो हुन्छ र हिउँद नोभेम्बरमा समाप्त भएपछि सुरु हुन्छ। यो सामान्यतया चिसो हुन्छ र चिसो छालमा पनि हिउँ पर्न सक्छ।
जॉर्डनको population२% जनसंख्या यहाँ बस्दछन् र यो धेरै अध्यागमनको साथ जनसंख्या हो। त्यहाँ अरब र प्यालेस्टाइनका सन्तानहरू छन् र तिनीहरू आउँदैछन्। यसको जनसंख्याको अधिकांश भाग सिनी मुस्लिम हो र यसैले त्यहाँ धेरै मस्जिदहरू छन्। त्यहाँ इसाईहरू पनि छन्, यद्यपि तिनीहरू अल्पसंख्यक छन्। अम्मान यो तल्लो भवनहरूको शहर होबीचमा, जहाँ केही आधुनिक टावरहरू निर्माण गरिएको छ र धेरै शीशाको साथ बाहेक। आवासीय भवनहरू चार भन्दा बढी कथा अग्लो छैन र प्रायः बालकनी र पोर्चहरू हुन्छन्।
त्यहाँ पश्चिमी मल्लहरू, पसलहरू, रेष्टुरेन्टहरू र बारहरू जताततै टाढा छन् रूढीवादी साइट हुनुपर्दछ.
अम्मान शताब्दीयौंको ईतिहास भएको सहर हो त्यसैले यसको एक प्रागैतिहासिक अध्याय छ, ग्रीक, रोमन, ओटोम्यान, यहाँसम्म कि ब्रिटिश पनि, जबसम्म यसको स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन। यो सँग एक राम्रो सार्वजनिक यातायात प्रणाली छ, हालसालै मर्मत गरिएको छ, त्यसैले एक पटक तपाईं यसको दुई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट मध्ये कुनै एकमा आइपुगेपछि तपाईं बस सार्न सक्नुहुन्छ। शहरको मुख्य एवेन्यूमा आठ राउन्डअबाउट्स छन् र यद्यपि ट्राफिक अराजक छ, तपाईंको बियरि getting पाउन अपेक्षाकृत सजिलो छ।
अम्मानमा पर्यटकीय आकर्षण के के हुन्? हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूबारे कुरा गर्न सक्दछौं, जुन ती चीजहरू हुन् जुन तपाईलाई कहिल्यै नबिर्सानुहोस्: गढी, रोमन एम्फीथिएटर, टर्की स्नान, मसलाको पसल, रोयल अटोमोबाइल संग्रहालय, जोर्डियन संग्रहालय, पुरातात्विक संग्रहालय र ग्यालरी। डे बेलास आर्ट्स, उदाहरण को लागी। दिन यात्राको अतिरिक्त जहाँ हाम्रो पहिलो गन्तव्य पेट्रा हो।
अम्मानको किल्ला यो सहरको सब भन्दा अग्लो पहाडमा छ, जेबेल अल-काला, लगभग 850० मिटर उचाईमा। यो पहाड कांस्य युगदेखि नै बसोबास गर्दै छ र यस गढीको वरिपरि पर्खालले घेरिएको छ जुन विभिन्न ऐतिहासिक अवधाहरूमा धेरै पटक पुनर्निर्माण गरिएको छ र १ 1700०० मिटर लामो छ। भित्र, के याद गर्नु हुँदैन उम्मेद प्यालेस र को मन्दिर हर्कुलस। यो मन्दिर मार्कस अरिलियसको समयमा निर्माण गरिएको थियो र यसको बाँकी अंशले यो देखाउँदछ कि यो एकदम सुन्दर मन्दिर थियो।
उमायाद दरबार शाही आवासीय परिसर हो जुन गभर्नरको घर थियो र इ.स. 749 XNUMX in मा भूकम्पमा नष्ट भयो र सदाका लागि विनाशमा रह्यो। क्रसको आकारमा विशाल श्रोता हल र स्पेनी पुरातत्वविदहरू द्वारा पुनर्निर्माण गरिएको अद्भुत छत अझै बाँकी छ। को cisterna यसको भर्या .को तल र स्तम्भमा जुन पानी स्तर र मापन गर्दछ बाइजान्टिन बेसिलिका छैटौं शताब्दी देखि यसको मोज़ेक संग। त्यहाँ सम्पूर्ण अit्ग्रेजी भ्रमण गर्न अडियो गाईडहरू छन्, प्रति घण्टा जेडी १ at मा।
El रोमन एम्फीथिएटर यो पुनर्स्थापित गरिएको छ। यो पहाडको छेउमा छ र छ हजार व्यक्तिको क्षमता छ। यो दोस्रो शताब्दीमा निर्माण गरिएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ र यस अभयारण्यले एथेनाको मूर्ति राख्यो जुन अहिले राष्ट्रिय पुरातत्व संग्रहालयमा छ। यो'० को दशकमा पुनःस्थापित गरियो तर कुनै मूल सामग्री प्रयोग गरिएन त्यसैले यो राम्रो लाग्दैन। बिहानको उज्यालो फोटो लिन र सूर्यास्त बत्ती लिनको लागि उत्तम हो, यो उत्कृष्ट छ।
थोरै आराम गर्न हामी सक्दछौं टर्की बाथ भ्रमण गर्नुहोस्। यहाँ महिलाहरु एकातिर नुहाउँदछन् र पुरुषहरु अर्को तिर। त्यहाँ तातो वा तातो जाकुजिस र चिसो सौनास छन्। अनुभव महान छ र हामी धेरै आराम। अर्को राम्रो अनुभव हो मसलाको स्टोरको भ्रमण गर्नुहोस्। अरोमाहरू अविश्वसनीय छन्! तपाईं गन्ध लिन सक्नुहुनेछ, स्वाद लिन सक्नुहुनेछ र आफूसँग घरमा जानको लागि अनौंठो मसलाहरू। तपाईं पनि एक स्वादिष्ट प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ जोर्डियन कफि, टर्की वा साउदी बीच छनौट गर्नुहोस्, स्वाद लिनुहोस् mezze, एपेटाइजरहरू वा तपस (फ्लाफेल, हम्मस, तबबूलेह, फट्टुश, जैतुन ...)।
El रोयल संग्रहालय को कार सन् १ 20 २० को दशकदेखि अहिलेसम्म जोर्डनको इतिहास प्रकट गर्दछ। कारहरू अघिल्ला राजाहरूको हुन्, राजा अब्दुल्ला प्रथम, राज्यका संस्थापक, पछि। त्यहाँ १ 1952 810२ लिंकन क्यापरी, १ 1936 300 कर्ड 1955१० र १310 मर्सिडीज बेन्ज S०० एसएल छ। पर्यटकहरूले जेडी pay तिर्ने गर्दछन् र संग्रहालय प्रत्येक दिन बिहान मंगलबार बाहेक खुला रहन्छ, बिहान १० देखि साँझ, सम्म, गर्मीमा ढोका बेलुका at बजे बन्द हुन्छ।
आफ्नो भाग को लागी जोर्डियन संग्रहालय यसको समृद्ध विरासत मार्फत देशको सांस्कृतिक इतिहास प्रकट गर्दछ। यो केन्द्रमा रहेको छ रस अल-ऐन हो र यदि तपाई मध्यपूर्वमा यस राज्यको भूत, वर्तमान र भविष्यमा चासो राख्नुहुन्छ भने यो रमाईलो ठाउँ हो। सावधान हुनुहोस् कि यो सोमबारमा बन्द हुन्छ। को पुरातात्विक संग्रहालय यसमा प्रदर्शनी हल, एउटा संरक्षण प्रयोगशाला, धेरै ग्यालरीहरू र अस्थायी प्रदर्शनीहरू छन् जुन यस देशको संस्कृति, सम्पदा र इतिहाससँग पनि सम्बन्धित छ।
दुई वा तीन दिनमा तपाईं सजिलैसँग अम्मानको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ यसको बिहान, दिउँसो र रातहरूको मजा लिदै। त्यहाँ नृत्य गर्नको लागि रेस्टुरेन्ट र क्लबहरू छन्, त्यहाँ क्याफेहरू र बारहरू छन् आराम गर्न, केही ताजा पेय र केही समयको लागि जॉर्डनियन शहरको अंश महसुस गर्न। र पक्कै पनि, यदि यो तपाईंको अवसर हो पेट्रालाई भेट्नुहोस् तपाइँ यसलाई याद गर्नुहुन्न: एक निजी यात्रा लगभग १० घण्टा चल्छ र चाँडै छोड्छ, बिहान 10 बजे पेट्रा यो २२225 किलोमिटर टाढा छ अम्मानबाट लगभग $ २०० गणना गर्नुहोस्।
यदि तपाईं भ्रमणमा गइरहनु भएको छैन भने तपाईंले बस लिन सक्नुहुन्छ र दुई किलोमिटर टाढा खंडहरको नजिकको शहर वाडी मुसाको पेट्रा भिजिटोर सेन्टरमा टिकट किन्नुहोस्। तपाईं खुट्टाहरू वा घोडाको पछाडि उचाइमा ढु rock्गाको पर्खालहरू, सीकबाट भग्नावशेषहरू पुग्नुहुन्छ। एक दिनको टिकटको लागत J ० JD छ र यदि तपाइँ लामो समय बस्नुभयो भने, एक रात, यसको मूल्य 90० JD छ। त्यहाँ साइटमा खाने ठाउँहरू छन् र प्रवेशद्वारसहित उनीहरूले तपाईंलाई सम्पूर्ण परिसर पत्ता लगाउन नक्शा दिन्छन्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नै खाना ल्याउन सक्नुहुन्छ।
तिमीलाई चाहिन्छ पेट्रामा सुत्न र अर्को दिन भ्रमण जारी राख्नु हुन्छ? तपाईसँग एउटा शिविर छ, सात वंडर बेडौइन क्याम्प, प्रति व्यक्ति २२ रात प्रति युरोको ओछ्यानसहित छ, रकी माउन्टेन होटेल १ breakfast देखि कोठासहित, breakfast 22 युरो अरबी ब्रेकफास्ट सहित वा होटल अल राशिद, नास्ता र वातानुकूलित र १ rooms बाट कोठा सहित यूरो, उदाहरण को लागी।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, अम्मानमा एक हप्ता भन्दा पनि कम संग तपाईंसँग जोर्डनबाट राम्रो पोष्टकार्ड छ। म मृत सागरको किनारमा एक स्पामा केही दिन लटरी गाउन थप्न चाहान्छु।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » अम्मान, जोर्डनको राजधानीमा के हेर्ने
बच्चाहरु संग यात्रा को लागी सल्लाह
इटालीको अमल्फी तटमा छुट्टीहरू